लोडसेडिङ त फेरि सुरु हुन थाल्यो, प्रदूषण हटाउनेबारे चिन्ता कसलाई होला ?
काठमाडाैं उपत्यकाआसपासको वायु प्रदूषणबारेमा विद्यार्थीको एउटा समूहको निष्कर्षबारे आएको समाचार पढेपछि एक जना साथीले अचम्म मान्दै मसित प्रश्न गरे‍‍‍, 'भक्तपुरको इँटाभट्टाबाट निस्केको धुवाँले त भक्तपुरलाई भन्दा पनि बनेपालाई पो धेरै प्रदूषित बनाउँदो रहेछ ।'
उनको जिज्ञासाको जवाफ मैले प्रतिप्रश्न गरेर सुरु गरेँ, 'के तपाईंले कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ- नेपालका प्राय: नदीहरू उत्तरबाट बग्न सुरु भएर किन दक्षिण पूर्वतिर गएका छन् ?'
उनले भने, 'हो त, प्राय: नदीहरू उत्तरबाट दक्षिणपूर्वतिरै बगेका छन् । तर, किन हो, थाहा छैन ।'
मैले उनलाई भनेँ, 'गुरुत्वले गर्दा उत्तरको उच्च भागबाट दक्षिणको तल्लो भागतिर पानी बग्ने कुरा त स्वाभाविकै भइहाल्यो, दक्षिणपूर्व जाने कारणचाहिँ पृथ्वी आफ्नै अक्षमा पूर्वबाट पश्चिम अर्थात् घडीको सुई घुम्ने दिशाको विपरीत घुम्ने गर्छ । जसले गर्दा नदीले आफ्नो दिशा पनि त्यसैअनुसार तय गर्छ ।'
यसै असरलाई हामीले भक्तपुरको इँटाभट्टाबाट निस्केको धुवालाई पनि दाँजेर हेर्‍याैँ भने त्यसले दक्षिणपूर्वी बाटो तय गर्छ र प्रदूषण बनेपामा धेरै हुन सक्छ । भलै हावाको बहाव कताबाट कता जान्छ भन्ने सवालमा अन्य कारणहरूको पनि असर हुने गर्छ ।
उच्च चाप भएको क्षेत्रबाट न्यून चाप भएकोतिर जाने, कतिपय स्थानीय भूगोलको अवस्थिति तापक्रमको कारणले हावा बहने दिशा दक्षिणपूर्व नै नभएर अर्कै पनि हुन सक्छ । यसले हामीलाई धेरै प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र कुन-कुन हुन सक्छन् भन्ने ज्ञान दिन्छ ।
हामीले श्वास लिने हावामा कस्ता-कस्ता प्रदूषणका कणहरू मिसिएका छन्, कुन समय, कुन सिजन, कुन ठाउँमा प्रदूषणको प्रभाव धेरै छ भन्नेबारे हामीमा सामान्य जानकारी हुन जरुरी छ । किनभने वायु प्रदूषणकै कारण नेपालमा वर्षेनि ४० हजारभन्दा धेरै मानिसको ज्यान जाने गरेको आँकडा देखिएको छ । यो जनस्वास्थ्यको चासोको विषय हो, हाम्रो उत्पादकत्वको क्षमता अर्थतन्त्रसित पनि सिधै जोडिएर आउँछ ।
हामी बाँचेको समय विकासको लालसासहितको छ, प्रकृतिको विनाशको मूल्यमा बनेका पूर्वाधार र आधुनिक जीवनशैलीका निम्ति बनेका हजारौँ लाखौँ उपभोग्य वस्तुहरू आज प्रदूषणको मुख्य कारकको रूपमा देखिएका छन् ।
प्राकृतिक कारणहरू जस्तै: ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा निस्किने ग्यास र खरानीको धुलो, मरुभूमिको बालुवा उडेर, भू-क्षयबाट निस्किने धुलोका कण वायुमण्डलमा मिसिँदा पनि प्रदूषणको तुवाँलो त हुने गर्छ तर मानव गतिविधिबाट सिर्जित प्रदूषण डरलाग्दो बन्दै गएको छ ।
प्रदूषित वातावरणमा बाँच्नुपर्ने विवशतामा हामी छौँ, वायु प्रदूषण मन्द विष सेवन गर्नुसरह भएको छ । हामीले बुझेको विकासमाथि नै आज प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । कलङ्की-नागढुङ्गा सडक खण्ड बन्दै गर्दाको धुवाँधुलोले वर्षाैं पिरोलेको अनुभव हामीसित छ । तर, सडक बनिनसक्दै भत्किएर धुलो उड्न थालिसक्यो । कलङ्की-नागढुङ्गा मात्र नभएर देशका धेरै ठाउँमा यस्तै दुर्दशा भोग्नुपरिरहेको छ, यस्ता दुश्चक्रबाट मुक्ति पाइने छाँटकाँट देखिँदैन ।
संसारको सबैभन्दा प्रदूषित शहर मेक्सिको सिटी भनेर हामीले पढेका थियौँ । केही दिनअगाडि मात्रै काठमाडौ उपत्यका संसारकै १ नम्बर प्रदूषित शहर बन्यो भन्ने समाचार आएको छ । हुन त हावालाई प्रदूषित गराउने धुवाँ, धुलोलगायत विषाक्त ग्यास के-के छन् र तिनीहरूको मात्रा कति छ भन्ने कुरा राम्रोसित अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रदूषणको मात्राबारे आएको समाचारलाई विश्वसनीय मान्न सकिन्छ ।
काठमाडाैं संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित शहर हो होइन, थप अध्ययन पनि जरुरी हुन सक्ला तर काठमाडाैंको वायुको गुणस्तर निकै खस्केकाले स्थिति भने अत्यासलाग्दो छ । सामान्यतया हावामा मिसिने औद्याेगिक धुवाँ, यातायातका साधनले फ्याँक्ने धुवाँ, पूर्वाधार निर्माणको क्रममा निस्किने धुलो र धुवाँ, उपभोग्य सामग्रीबाट निरन्तर निस्किने रासायनिक ग्यास आदि नै हाम्रो वायु प्रदूषणका स्रोतहरू हुन् ।
सन् १९९९ मा हिन्द महासागरको अध्ययनका क्रममा देखिएको तुवाँलोको तहलाई सुरुमा एसियन ब्राउन क्लाउड अर्थात् एबीसी नाम दिइएको थियो । तर, पछि संसारका अन्य ठाउँमा पनि यस्तो किसिमको समस्या देखिने भएकाले यसलाई एसियन नभनेर एटमस्फ़ेरिक ब्राउन क्लाउड (एबीसी) भन्न थालियो । एबीसी पेट्रोलियम पदार्थ बाल्दा निस्किने विषाक्त धुवाँ र जैविक पदार्थ बाल्दा निस्किने कार्बन अर्थात् खरानीको धुलो जसलाई एरोसोल पनि भनिन्छ, त्यो हावामा मिसिन जाँदा समुद्री सतहबाट माथि ३ किलोमिटरको दूरीमा माथि हावामा तैरिएर रहन्छ ।
प्रदूषणको त्यस तुवाँलोले सूर्यको प्रकाशलाई पृथ्वीको सतहमा आउनुपर्ने जति ताप र प्रकाश आउन दिँदैन । यसले गर्दा पृथ्वीको सतह पर्याप्त तात्न नपाउँदा पानीको वाष्पीकरण कम हुन जान्छ र जलचक्रमा नै असर पर्न जान्छ । साथै, बिरुवाहरूले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाबाट खाना बनाउँदा पर्याप्त प्रकाश नपुगेर कृषि उत्पादन पनि घट्न जाने हुन्छ ।
खासगरी यो सुक्खा मौसममा धेरै हुने गर्छ । एकातिर हरित गृह ग्यासका कारण पृथ्वीको तापमान बढिरहेको दाबी तथ्यहरूसहित आइरहेका छन् भने अर्कोतिर एबीसीका कारण पृथ्वीको सतह चिसिएका तथ्यहरू देखिएका छन् । सामान्यतया एरोसोल कणहरू उच्च तापको क्षेत्रबाट न्यून ताप भएको क्षेत्रतिर सर्दै जान्छन् । यसका कारण चिसो हिमाली भागतिर पुगेर ती कणहरू सतहमा जम्मा हुन् पुग्छन । एबीसीका कणहरूको घनत्व हावामा धेरै छ भने तिनीहरूले सूर्यको प्रकाशलाई सोस्ने, परावर्तन गर्ने क्षमता धेरै हुन्छ र सँगसँगै ताप फ्याँक्ने पनि गर्छ । यसले गर्दा वायुमण्डलमा भएका हरित गृह ग्यासको तापक्रम बढ्दै जाने र पृथ्वीको सतहमा सूर्यको ताप र प्रकाश कम आउने हुन जान्छ ।
यदि वायुमण्डलबाट रातारात एबीसी हटाउन सक्ने हो भने पेरिस सम्झौताले भनेजस्तो औद्याेगिकीकरणपूर्वको तापमानभन्दा २ डिग्री सेल्सियससम्मको तापमान वृद्धिमा सीमित गर्न असम्भव देखिन्छ, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि सोचेभन्दा निकै छिटो हुन जान्छ । एबीसीले पृथ्वीको तापमान नियन्त्रणमा भने सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । तर, हाम्रो हिमालयन क्षेत्र भने दोहोरो असरबाट प्रभावित छ ।
हरित गृह ग्यासका कारण पृथ्वीको तापमान वृद्धि हुँदा हिउँ पग्लने क्रम तीव्र हुँदै गएको छ भने एबीसी उत्तरी हिमाली क्षेत्रतिर गएर सतहमा जम्मा हुँदा त्यसले प्रकाश र ताप सोस्ने र परावर्तन कम हुने भएकाले हिउँ पग्लिने कुरालाई अझ तीव्रता दिएको छ र सफा पानीको स्रोतलाई समेत प्रदूषित बनाएको छ । केही वर्षअगाडि सगरमाथाको पानीमा एबीसीका कण भेटिएको भन्ने एउटा अध्ययनको दाबी थियो ।
जैविक चक्र, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक सम्पदामा असर
एबीसीले दक्षिण एसियाको मनसुन चक्रलाई नै खलबल्याएको छ । ओजोनको मात्रा बढ्दै जाँदा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म कृषि उत्पादनमा गिरावट आएकाे छ । एरोसोलमा पाइने सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बनका यौगिकहरूको रासायनिक र विद्युतीय विशेषता पनि हुन्छ ।
यिनै विशेषताले गर्दा वायुमण्डलमा अम्ल बन्ने प्रक्रिया पूरा भई अम्लीय यौगिकहरू वर्षाको रूपमा पृथ्वीको सतहमा आउँदा त्यसले जैविक चक्रलाई पनि असर पुर्‍याइरहेको छ । पानी र खाद्य पदार्थमा मिसिन गएका विषाक्त पदार्थकै कारण कैयौँ वनस्पति र जीवका प्रजाति हराउने जोखिममा पर्ने भएका छन् । साथै, हाम्रा भवन, पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई पनि प्रदूषण र अम्लीय वर्षाले क्षयीकरण गर्दै लैजाने समस्या हुन्छ ।
अहिले संसारभर सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य चुनौती भनेको वायु प्रदूषण बनेको छ । वायु प्रदूषणले प्रत्येक वर्ष ४३ लाख मानिस घरभित्रको दाउरा, गुइँठालगायत जैविक पदार्थबाट निस्कने धुवाँका कारण र ३७ लाख मान्छे बाहिरी गुणस्तरहीन हावाका कारण अकालमा मरिरहेका छन् । एबीसीमा रहेका कणहरू हामीले सास फेर्दा फोक्सोमा पुग्छन् र कतिपय रगतमा मिसिन पुग्छन् ।
रगतमा मिसिएका हानिकारक विषाक्त कणहरूकै कारण मुटुसित सम्बन्धित रोगहरू लाग्ने र हृदयाघातको सम्भावनालाई बढाउनेसम्म हुन्छ । फोक्सोको क्यान्सर, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरूको जोखिम बढ्दै जान्छ । प्रदूषित वातावरणमा काम गर्दा आँखा पोल्ने, छालाका समस्या देखिने, चिडचिडाहट हुने र मानसिक समस्यासमेत आउन सक्छ ।
बालबालिकाको मस्तिष्कको उचित ढंगले विकास हुन नपाउने र रचनात्मक क्षमतामा ह्रास आउने पनि हुन्छ । धुलोका कण, जमिनको सतहवरिपरि पाइने ओजोन, गाडीबाट निस्किने धुवाँमा हुने कार्बन मनो अक्साइड, सल्फर डाइ अक्साइड, नाइट्रोजन डाइ अक्साइड र सिसालाई छवटा खतरनाक प्रदूषक मानिन्छ ।
ओजोन रासायनिक रूपमा सक्रिय अणु भएकाले सजिलै फोक्सोमा पुगेपछि शरीरभित्रै अन्य पदार्थसित टाँसिएर रहन्छ, कार्बन मनो अक्साइड रगतको हेमोग्लोबिनमा सजिलै मिसिन जान्छ, सल्फर डाइ अक्साइड र नाइट्रोजन डाइ अक्साइड पनि रासायनिक रूपमा सक्रिय यौगिक भएकाले फोक्सो हुँदै शरीरभित्र प्रवेश गरेपछि सजिलै बाहिर आउँदैनन । पेट्रोलियम पदार्थ बाल्दा निस्कने धुवाँसितै रहने सिसा त झनै फोक्सो हुँदै रगतमा मिसिन्छ, हड्डी, नरम तन्तुहरूसम्म पुग्छ । यसले मिर्गाैलालाई समेत असर पुर्‍याउन सक्छ ।
वायु प्रदूषणका कारण मौसममा आउने उतारचढाव, जलचक्र, पृथ्वीको सतहमा आउनुपर्ने प्रकाश र तापको मात्रामा कमी हुँदा कृषि उत्पादनमा कमी, खाद्य गुणस्तरमा कमी र कतिपय उत्पादन प्रदूषित समेत हुन पुग्दा त्यसको आर्थिक नोक्सानी निकै ठूलो हुन जान्छ । यसले हाम्रो खाद्य सुरक्षामा प्रतिकूल असर मात्रै पारेको छैन, वातावरणीय सन्तुलन र अन्य प्राणीको खाद्य निर्भरतामा समेत उल्लेख्य क्षति पुर्‍याएको छ ।
प्रदूषणकै कारण जैविक विविधता जोखिममा पर्दै गएको छ । पानीका स्रोतहरू असुरक्षित बन्दै जाँदा समग्र पर्यावरणीय चक्र नै प्रभावित बन्दै गएको छ । प्राकृतिक सम्पदामा पुगेको क्षति र मानव निर्मित पूर्वाधार र सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको क्षतिले कैयौँ समुदायको प्रत्यक्ष जीविकोपार्जनमा असर परेको छ, पर्यटन व्यवसायमा असर पुगेको छ ।
केही वर्षअगाडि सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमणमा रहेका पर्यटक मौसम खराब हुँदा लुक्ला विमानस्थल चालू नभएकाले खर्च सकिएर अलपत्र परेका थिए । हिमाली भेगको मौसममा निकै छिटो उतारचढाव आउने गर्छ, यो समुद्री मौसमसित प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । भारतको उडिसा क्षेत्रमा आएको हुद हुद आँधीले मुस्ताङमा एक्कासि ठूलो हिमपात भएको केही वर्षअगाडि मात्र हामीले देखेका थियौँ ।
प्रदूषणका कारण सांस्कृतिक सम्पदाको क्षयीकरणले त्यसको सौन्दर्यता र आयुमा असर पुग्दा पर्यटक घट्छन् र आम्दानी पनि घट्न जान्छ । अर्को ठूलाे आर्थिक क्षति त मानव स्वास्थ्य र अन्य जीव जनावरको स्वास्थ्यमा आउने समस्यासित जोडिएको छ । विभिन्न प्राणघातक दीर्घ रोगहरू निम्त्याउने प्रदूषणले मानिसको उत्पादन क्षमतामा पुर्‍याउने असर, उपचारमा हुने खर्च र स्वास्थ्य चुनौतीलाई सामना गर्न राज्यले थप रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यताको आर्थिक आकार निकै ठूलाे हुन्छ ।
प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास
सरकारी निकायका कर्मचारीबाट बेलाबेलामा मन्त्रीलाई उपस्थित गराएर गाडीको प्रदूषण जाँच गरिएको फोटो खिचाउँदै ठूलै काम गरे जसरी प्रचार गरिन्छ । तर, भोलिपल्टदेखि कसैलाई त्यसबारे चासो देखिँदैन । उपत्यकाका ठाउँठाउँमा राखिएका प्रदूषण मापन गर्ने मेसिनहरूले तोकिएको मापदण्ड (संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेको PM2.5 काे मात्रा २४ घण्टाभित्र ३५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर र PM10 को मात्रा १५० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर) भन्दा धेरै वा थोरै कति छ भन्ने जानकारीसम्म दिएका छन् ।
फितलाे कानुन र करिब शून्य नियमनकै कारण पुराना गाडी, उद्योग, इँटाभट्टा, निर्माण कार्यबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिएकाे अवस्था छैन । तोकिएको मापदण्डभन्दा धेरै धुवाँ फ्याँक्ने गाडीहरू विस्थापित गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा सरकार उदासीन देखिन्छ ।
विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर प्रधानमन्त्रीले भाषण ठोक्दै हिँड्छन । तर, अर्थ मन्त्री विद्युतीय गाडीमाथिको कर वृद्धि गर्छन् । प्रदूषण नियन्त्रणबारे न त नीतिगत प्रयास देखिन्छ, न त भएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नै हुन्छ । इँटाभट्टा सुधार गरेर निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मात्र चलाउन दिने भन्ने चर्चा चल्यो तर समस्या ज्युँका त्युँ छ ।
हाम्रो समयको यति ठूलाे समस्याको विषय बनेको 'वायु प्रदूषण' जिम्मेवार निकायका लागि कुनै समस्या नै लागेन, चिन्ता नै देखिएन । के सडकमा राजनीतिक नारा फलाकेर चिच्याउनेहरूले 'प्रदूषण नियन्त्रण गराैँ' भनेर पनि चिच्याउन सक्छन् ? हटेको लोडसेडिङ त फेरि सुरु हुन थाल्यो, प्रदूषण हटाउनेबारे चिन्ता कसलाई होला र ? अहिलेलाई राम्रो मास्क लगाएर हिडौँ, प्रदूषणबाट बच्ने प्रयास गरौँ, आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउँदै गरौँ !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २४, २०७७, १५:०९:००